२२ वर्षका युवकका तीनवटी श्रीमती, तीनैवटी मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/२२ वर्षका युवकका तीनवटी श्रीमती, तीनैवटी मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता !
काठमाडौं। सौता भन्ने शब्द महिलाहरुलाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विवाहपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदाहरणहरु छन् । महिलाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर विवाहित महिलाले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता । उनीहरु अरु धेरै कुरा सहन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमानलाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् । तर एक २२ वर्षका युवकका तीन श्रीमतीहरुले भने चौथी सौताको खोजी गरिरहेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **